render | YoeYar CG Blog | Page 2
Tagged with render …
တစ်နေ့တွင် ဝမ်းမရီနာ ဘိုလီဗတ်သို့ ဖော်မပါတစ်ကိုယ်တည်း ကင်မရာတစ်လုံး၊ ပေကြိုးတစ်ချောင်းဆွဲကာ ထွက်ခဲ့လေ၏။ အခါတိုင်းကား သူတပါးရိုက်လာပေးသော ဓာတ်ပုံ၊ အတိုင်းအတာ၊ Autocad Plan တို့ကို အခြေတည်ကာ 3D ပုံများ ဆွဲရသော်ငြား ယခုတွင် ကိုယ်စီကိုယ်စီ မအားမလပ်နိုင်အောင် ရှိကြသောကြောင့် တစ်ကိုယ်တော် ကြဲရတော့မည်။
သို့ဖြင့် ယင်းသို့ရောက်သော် လုံခြုံရေးအမျိုးသမီးကို ခွင့်တောင်းရ၏။ ယင်းကား အူကြောင်ကြောင်လုပ်နေသဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ကောင်တာမှ အမျိုးသမီးထံ ရောက်သွားလေ၏။
“အဟင်းဟင်း မောင်လေးကလည်း ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ”
“ဒီလော်ဘီကို ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ ပြောတာခင်ဗျ”
မချောကား မျက်နှာတစ်ချက် တင်းသွားကာ သူ့ဘေးမှ အမျိုးသမီးနှင့် ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ် တိုင်ပင်လေ၏။ ယင်းနောက် ကျွန်ုပ်ဘက် ပြန်လှည့်လာလေသည်။
“ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးရှင့်.. 12 ထပ်က အဆောက်အအုံထိန်းသိမ်းရေးက စာထုတ်ပေးမှ ရိုက်လို့ရမယ်”
သို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း ၁၂ ထပ် တက်ရ၏။ အနှီပုဂ္ဂိုဟ်ကား သဘောကောင်းလှ၏။ သူအောက်ကလူတွေကို အကြောင်းကြားလိုက်မည်။ ရိုက်သာရိုက်ပါဟူ၏။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ်လည်း အောက်ထပ် ပြန်ဆင်း၏။ ရိုက်မည်ပြု၏။ လုံခြုံရေးအမျိုးသမီးက လာတား၏။ ကောင်တာသို့ရောက်၏။ ကောင်တာမှ မချောနှင့် အခြေအတင် စကားများးကြ၏။ လုံခြုံရေးမှ လူကြီးရောက်လာ၏။ ကျွန်ုပ်က ရှင်းပြ၏။ ၁၂ ထပ်သို့ ဝေါ်ကီတော်ကီများဖြင့် လှမ်းဆက်ကြ၏။ အော်ကြ၏။ ပြောကြ၏။ အချင်းချင်းလည်း စကားများကြ၏။ နောက်ဆုံးတွင်ကား ရိုက်နိုင်ပါပြီဟူ၏။
ဤပုံကား ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးတိုင်းတာခဲ့သော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသောပုံဖြစ်လေတော့သတည်း။ :P
၂၀ဝ၁ ကနေ ၂၀ဝ၉ ထိ လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေကို အကျဉ်းချုပ် ပြနိုင်အောင်၊ ပြရအောင် အရင်က clip တွေ Render တွေထုက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ဖြတ်ပြီး ဒီဗီဒီယိုကို လုပ်တယ်။
One of my demo reel videos. I used to use it to show off my creations. But afterawhile, I began to understand that I need to learnalot more. The world is really wide and I am still justasmall fry:)…
Demoreel from Lionslayer on Vimeo.